Wasiirka Ersoy ayaa soo gaadhay Sarıkamış oo ay weheliso hay'adda 'Express Express' RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari36 KarsWasiirka Ersoy wuxuu soo gaadhay Sarıkamış oo ay weheliso hay'adda 'Express Express'
24 / 02 / 2020 36 Kars, tareenka, Gobolka Waqooyi Bari, SAWIRADA, GUUD, Headline, TURKEY
wasiirku wuxuu u yimid sarikamisa isagoo leh geeska bari
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy ayaa ka safray Erzurum kuna sii jeeday Kars oo ay la socoto shirkadda Express Express.
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy, oo diyaarad uga yimid magaalada Istanbul ee magaalada Erzurum, ayaa waxaa la aaday Kars oo ay wehliyaan wakiilo ka socda saxaafadda. Wasiirka Ersoy, oo ka soo safray Erzurum kuna sii jeeday degmada Sarıkamış ee Kars oo ay wehelisay hay'adda Eastern Express, ayaa imtixaanno ku qaaday harada Çıldır maalintii labaad ee barnaamijka.
Joojinta koowaad ee Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy ee barnaamijka usbuuca dhamaadkiisa oo ay wehliyaan wakiilo saxaafadeed ayaa ahaa Erzurum. Yunus Yeşilyurt, Maareeyaha Howlgalka TCDD Erzurum, wuxuu warbixin ka siiyay howlaha ku yaal madxafka Wasiirka Ersoy, kaasoo booqday matxafka TCDD isagoo u yimid Erzurum Station isaga iyo dadkii la socday.
Wasiirka Ersoy, oo halkan uga ambabaxay si uu Kars ula aado East Express, ayaa waxaa weheliyey kuxigeenka AK Party Ahmet Arslan iyo kuxigeen Yunus Kılıç wasiirradii hore. Wasiirka Ersoy wuxuu fiidnimadii la kulmay hay'adaha samafalka ee ugu sareeya gobolka; Wuxuu qiimeeyay dadaallada lagu kordhinayo awoodda dalxiiska ee magaalada. Kulankan waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirkii hore ee gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta, AK Party Kars kuxigeenka Ahmet Arslan iyo kuxigeen Yunus Kılıç, gudoomiyaha gobolka Kars Türker Öksüz, gudoomiyaha degmada Sarıkamış Recep Koşal, taliyaha booliska gobolka Yavuz Sağdğ iyo taliyaha gobolka Gendarmerie Colonel Hidayet Arıkan.
Wasiirka Ersoy iyo suxufiyiintu waxay booqdeen Çıldır Lake maalintii labaad ee barnaamijka. Wasiirka Ersoy, oo fuushanaa meel ku dhow Lake Çıldır, oo ah harada labaad ee ugu weyn bariga Anatolia oo dushiisa gebi ahaanba ay ka buuxsantay baraf inta lagu jiro xilliga qaboobaha, ayaa ku habsaday shabagyo ku dhex jira harada ay Eskimo ku kalluumeysanayeen, isla markaana sawirro wanaagsan la qaatay martidiisa.
Wasiir Ersoy ayaa markii dambe bayaanno u diray suxufiyiinta; Khudbadiisa ayuu ku bilaabay isaga oo u rajeeyay naxariistiisa dadkii ku naf waayey dhulgariirkii ka dhacay galbeedka Iran iyo saameynta Van, isagoo u rajeeyay eheladooda.
“Waxaa jira kobac dhab ah oo ku saabsan suurtogalnimada dalxiiska ee Kars,” ayuu yiri Wasiir Ersoy, “Waxaan la nimid Touristic Eastern Express annaga iyo xubnaha saxaafadda. Waxaan sidoo kale booqanay Xarunta Ski Center. Waxaa jira baahiyo qaarkood. Waxaan ku qiimeynay kuwan maalgashadayaasha dalxiiska iyo kooxaha Maamulka Khaaska ah ee Gobollada. Kadib markaan abuurno warbixinnada suurtagalka ah ee loo baahan yahay, ayaan go'aan ka gaari doonaa. ” Wuxuu adeegsaday muuqaalkiisa.
Wasiirka Ersoy wuxuu caddeeyey in Kars ay leedahay laba dal oo dalxiis oo muhiim ah wuxuuna yidhi:
“Midkood waa Xarunta Sarıkamış Ski Center kan kalena waa suuragal dalxiis oo uu abuuray booqashada tareenka iyo booqashada goobaha taariikhiga ah iyo muuqaalka ee goobta isagoo jooga Kars dhowr maalmood. Waxaan ka wada hadalnaa sidii aan u balaadhin laheyn oo aan u horumarin laheyn. Waxaa jira koror dhab ah xagga dalxiiska ee Kars iyo tirada dadka soo booqda. Waxaan rajeyneynaa in tani ay sii socon doonto sanadaha soo socda. ”
Isagoo sheegay inuu yimid Lake Çıldır markii ugu horeysay, ayuu Wasiir Ersoy yiri, “Waxaa jira farxad yar oo fudud iyo fursad lagu helo kalluunka. Xaqiiqdii, tan waxaa loo rogi karaa awood aad u muhiim ah, waxaa sidoo kale la keeni karaa marka la eego dhinaca dalxiiska. Sida iska cad, waxaan u baahan nahay inaan tan u rogo dhaqaala dalxiis. ” ayuu hadlay.
Intii lagu guda jiray booqashada Wasiirka Ersoy, Guddoomiyaha Türker Öksüz, AK Party Kars kuxigeenada Ahmet Arslan iyo Yunus Kılıç, Gudoomiyaha AK Party Adem Çalkın, Taliyaha Booliska Yavuz Sağdıç, Taliyaha Gobolka Gendarmerie Kornel Hidayet Arıkan, Maamulaha Gobolka Dhaqanka iyo Dalxiiska Dalxiiska Hakan Doğanay .
Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska Ersoy Waxay ku soo baratay Eastern Express
Fis Sarıkamış Skiing Cup
Guryaha Sarikamis ee Ski-ga ah ayaa la buuxiyey inkastoo qaboojiyaha
Abant iyo Sarikamış oo caddaan ah
Sarıkamış Ku raaxeysiga sarkhaan
Kalaweelada Barafka wuxuu helaa 75 Centimeters Xarukada Sarıkamış Xarunta Dhexe
Adeegga tareenka ee Ankara-Kars
Saldhigga Tareenka Erzurum
Matxafka TCDD Erzurum